Kooxo burcad badeed Soomaali ah oo lagu xukumay maxkamad ku taala wadanka Faransiiska – idalenews.com
Maxkamad ku taala magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa xukuntay afar dhalinyaro Soomaali ah oo lagu eedeeyey burcad badeednimo iyo afduubka markab laga leeyahay dalkaas oo marayey xeebaha Somalia.
Garsooraha maxkamada dacwada dhalinyaradan qaadaysay ayaa ku dhawaaqay in kooxdan Soomaalida ah oo ka kooban afar nin ay khatar galiyeen nolosha labo qof oo Faransiis ah, kuwaasoo la socday markab lagu magacaabo Carre d’As oo bishii September ee sanadkii 2008-dii u gacan galay burcad badeeda inkastoo markii dambe xoog looga sii daayey.
“Dhalinyaradaan ayaa lagu eedeeyey iney dalbadeen xilligii ay afduubka u heysteen markabka Faransiiska lacag madax furasho ah oo gaareysa labo million oo Dollar sida ay sheegeen dacwad oogayaasha Faransiiska hase ahatee ciidamada Faransiiska ayaa markii dambe xoog ku furtay markabkaasi iyo shaqaalihii la socday, raggan la xukumayna soo xirxiray.
Dhalinyaradan oo aan magacyadooda la shaacin ayaa da’dooda u dhaxeysaa 22 illa 36 sano jir, waxaana maxkamadu ku xukuntay 4 illaa 8 sano oo xarig ah, iyadoo maxkamadu ay sii deysay nin shanaad oo raggaas lala soo qabtay ka dib markii wax dembi lagu waayey.
Boqolaal Soomaali oo lagu eedeeyey burcad badeednimo ayaa ku xirxiran xabsiyo ku yaala qaar ka mid ah dalalka caalamka ka dib markii ay xukumeen maxkamadaha dalaalkaas.